Eyona nto ibalaseleyo yokukhanya kwesibane esingxamisekileyo kunye nomthengisi | Zhenhui
Ikhaya > Iimveliso > Izibane zikaxakeka
Kwakhona iindlela ezimbini, ezigcinwe kwaye zingagcinwanga. Igcinwe kuthetha ukuba ezona ndawo zinokuHlonga ziQhekezekileyo ziya kuqhubeka nokukhanya nangaliphi na igunya lombane okanye zinqunywe, izibane ezingxamisekileyo zinokubonelela ngesikhanyiso sakho ngokwaneleyo ngexesha lemeko yongxamiseko. Ukungagcinwa kuloliwe kuthetha ukuba imeko yengxamiseko iya kukhanya kuphela xa kuncipha amandla. Unokukhetha ngokwendawo ofuna ukusebenzisa kuyo izibane ezingxamisekileyo.
Izibane ezizenziwe nguZhenhui zinokuqinisekiswa komgangatho, zinokuthenjwa, kunye nokukhethwa kwakho.
Ukukhanya okungxamisekileyo ze-ZF-625a-20 kunye ne-ZF-625A-10 kunye ne-ZF-625a-30
Zhenehui i-Shact Light Shact ZF-625A-20 kunye ne-ZF-625A-10 kunye ne-ZF-625A-30, sinokuyila iimveliso ezintsha zeSebe
I-Twin Engxamisekileyo yeTwin
Zhenhui i-Twin yeTwin i-2021, sinendibano kunye neofisi malunga neemitha ezingama-50000 kwaye sibambe iimfuno zakho eziphezulu.
Ingxamiseko phantsi kokukhanya kwe-2021 ithengiswa ngexabiso elifanelekileyo
Zhenehui ihenketho kaxakeka kwi-1821 ngexabiso elihle-Zhenhui, sinokuyila ezinye iimveliso ezintsha ngokweenkqubo zethu zemveliso
Abavelisi be-Lampgemes yengxamiseko yobuchule abangama-2021
Zhenhui ubuchule bokuxakeka kwezemidlalo ngoxakeka 2021 abavelisi, sineminyaka engama-30 ngamava kwizibane ezingxamisekileyo ukusukela ngo-1991.
HighQuality Radar induction ezintathu anti anti isilingi ixesha likaxakeka imizuzu eyi-120 12W 16W Ihowuliseyili-Guangdong Zhenhui Fire Technology Co., Ltd.
HighQuality Radar induction ezintathu anti isilingi isibane xesha likaxakeka 120 imizuzu 12W 16W Ihowuliseyili-Guangdong Zhenhui Fire Technology Co., Ltd. Imveliso ayisengozini yokuphela kombala. Iphathwa ngearhente yokulungisa umbala okanye ukutyabeka umgubo ukuphucula amandla ayo okugcina umbala.